Adịla Elekwasị Anya na Ndụmọdụ nke SEO Iceberg | Martech Zone
Adịla Elekwasị Anya na Ndụmọdụ nke SEO Iceberg
Otu n’ime ụlọ ọrụ SEO were foto nke iceberg n’elu ebe obibi ha. M hụrụ n'anya ntụnyere nke aisbeg mgbe ọ na-abịa search engine njikarịcha. Mkparịta ụka anyị na ndị ahịa nwere nso nso banyere nloghachi ha na mmefu ego Search Engine Optimization nwere ụfọdụ nchegbu na ha na-enweta ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa pụrụ iche n'afọ gara aga maka ahịrịokwu okwu anyị na-elekwasị anya, na-akwalite na nsuso.
The isiokwu bụ nnọọ ihe pụrụ iche na m na-enweghị ikike ịkọrọ ya…. ma na-enyocha ha nchịkọta, ha ndị naanị ịnweta nleta ole na ole… maka nke ahụ Kpọmkwem isiokwu. Agbanyeghị, enwere ihe dị ka nleta 200 kwa ọnwa maka ọchụchọ metụtara isiokwu tupu anyị arụ ọrụ na njikarịcha. Mgbe emechara ihe omume SEO nke mere ka ha gaa # 1, nke toro karịa 1,000 nleta kwa ọnwa. Isi okwu a n’onwe ya na - ebute nleta ole na ole tupu na ọtụtụ mgbe. The ahịa bụ naanị atụ Kpọmkwem okwu ọ bụghịkwa mkpa niile metụtara ya.
Enwere isiokwu isiokwu 266 metụtara onye ahịa ahụ na-enweta okporo ụzọ tupu mmemme ahụ. Nke ahụ toro na nkebi ahịrịokwu isiokwu 1,141 metụtara na ha na-enweta okporo ụzọ na nkwalite na njikarịcha post. Ihe ọchụchọ isiokwu 1,141 ndị ahụ metụtara 20,000 ndị ọbịa ọhụrụ gaa na saịtị ahụ. Mgbe ị gbakọọ nloghachi na na ego, ọ bụ ezigbo mmeri. A maara okwu ndị ahụ dị ka ogologo-ọdụ Keywords, na mgbe ụfọdụ enwere ndị ahịa, ego na ohere ebe ahụ karịa ịlụ ọgụ ya na asọmpi na isiokwu dị elu.
Isi okwu bụ na SEO adịghị amasị ịzụta isiokwu na PPC. Nchọgharị Organic nwere ohere iji bulie okporo ụzọ gị site na netwọkụ mkpụrụedemede isiokwu metụtara ya. Nke a dị oke mkpa na atụmatụ nyocha ọchụchọ gị. Ọ bụrụ na uche gị niile dị na n'ọnụ ọnụ iceberg, ị naghị a attentiona ntị na oke ọnụọgụ nke okporo ụzọ ndị metụtara ọchụchọ ọchụchọ na-ewetara gị.
Usoro ọzọ ebe nke a bụ esemokwu bụ nyocha mpaghara. Highbridge na nso nso a nyochara SEO na ụlọ ọrụ dabere na ọrụ na-arụ ọrụ mba. Nkwalite ha, ọdịnaya ha, nhazi saịtị ha - atụmatụ SEO ha dum - naanị lekwasịrị anya na usoro ọrụ izugbe na-enweghị ọdịdị ala ọ bụla.
Ndị asọmpi na-eri nri ehihie ha - inweta a narị ugboro okporo ụzọ n'ihi na ndị asọmpi ahụ ji ọgụgụ isi lekwasị anya maka ọdịdị ala dị ka isiokwu ọrụ. Mgbe ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ na ha SEO ọkachamara, geography abịabeghị na mkparịta ụka ahụ n'ihi na mpịakọta ọchụchọ enweghị isi. Onye ọkachamara SEO lekwasịrị anya na ọnụ mmiri iceberg… ma hapụ 90% + nke nta, ọchụchọ ọchụchọ ala.
Companylọ ọrụ ahụ nọ na nsogbu… ha nwere ọtụtụ ala iji gbalịa imezi ma ọ bụrụ na ha nwere olile anya ịbụ onye ndu na ọchụchọ metụtara ọrụ. Nke bụ eziokwu bụ na nchọta mpaghara bụ isi okwu mgbe ị na-achọ ọrụ mpaghara. Not na-agaghị ịchọ “ụgbọ ala na-asacha” na Google… ị na-aga ịchọ agbata obi gị ma ọ bụ obodo na mgbakwunye na "ụgbọ ala asacha". O nwere ike ọgaghị enwe nnukwu ọchụchọ maka “Albuquerque car wash”
Ọ dị mma iduzi atụmatụ na njedebe nke iceberg, tụọ ya, nyochaa ya, ma bulie ya elu. Agbanyeghị, echefula na ị na-arụ ọrụ naanị n'ọnụ!
Ndi saịtị gị na-ata ahụhụ site na mbido aka?